အဒူ​တေတုန်းဟင်​င်​? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အဒူ​တေတုန်းဟင်​င်​?
Posted by ムラカミ on Feb 15, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Drama, Essays.., Members | 21 comments
​သေတဲ့ ကျတဲ့ လူ​တွေလည်းမနည်း
ဟိုလူကြီး​ပြောတာက​တော့ ဆီခိုးထုတ်​တဲ့ ကမတ်​တို့ မ​ဝေတို့ကို
ခုကျမှ အလုံးအရင်း ဖမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ ဆက်​စပ်​ပါသတဲ့
​အဲ့လို လုပ်​ခဲ့တာ အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
အ​နောက်​ဘက်​ အိမ်​နီးချင်းနဲ့ ပတနာတက်​လိုက်​နဲ့
အ​နောက်​အိမ်​နီးချင်းဆိုလို့ တ​လောကပဲ အဖြူ​ရောင်​ ကတ်​​တွေကိစ္စကွိုင်​ပြီးပြီ
အဲ ​ဘေတား တို့ ဘင်​ဂါဘလက်​ တို့ကို ၀ှိုက်​ကတ်​ ထုတ်​​ပေးခဲ့တာ​ရော အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
​ဘေတားက​တော့ထားပါ​လေ ဘင်​ဂါဘလက်​ကိုက ၀ှိုက်​ကတ်​အစား ဘလက်​ကတ်​ ထုတ်​​ပေးရမှာ
အံမယ်​ ဒင်းကဒါကို ဘလက်​​လေဘယ်​ ကတ်​လိုက်​ဒုတ်​​ပေးမယ်​မှတ်​ပီး ​ပျော်​ချင်​​ပျော်​အူးမှာဗျ
ဟာဂျီမွသဲ က​တော့ ဂလို​တေပြသနာတက်​တာမဆုံးရင်​ဖြင့်​ သူ့အ​ရှေ့အလည်​ပိုင်းခရီးစဉ်​အတွက်​စိုးထိတ်​မိတယ်​လို့ ပါ့စ့်​ပို့​လေးတုန်​တုန်​ရီရီကိုင်​ရင်းဆိုရှာတယ်​
တကယ်​က ​ကျောင်းထိုင်​ကိုယ်​​တော်​ကြီးက သပိတ်​​တွေ​ခြောက်​​အောင်​ထားစမ်းဆို့လို့ ကပ်​ပိယကြီးက ​မှောက်​ထားဇမ်းကွာဆိုလို့ ​မှောက်​ရရှာတာပါ
မအလ တို့ဘက်​က သ​ဘူ​တောပီးတာ​တောင်​ ဆက်​​လက်​​နေတာ ရဲ့ ​နောက်​ကွယ်​မှာ ရှိ​နေနိုင်​တာက အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
၃သိန်းေ​အာက်​ဆို ​အေး​ဆေးဆို​တာ​တော့ သိပီးမှာ​ပေါ့ဗျာ
အဘနိုတို့လို အိမ်​တလုံးပီးတလုံး​ဆောက်​ သားသမီး​တေ ကန်​ပနီ​ထောင်​​ပေး​နေတာ​တေက​ရော အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
အင်း​လေ ​ဆောက်​နိုင်​မှာ​ပေါ့ အဘနိုက ခရိုနီခံ​ဇော်​နဲ့ ​ပေါင်းစား​နေတာကိုး [အာလူး​ခြောင်း​ကျော်​​တွေ]
ပိုက်​ပိုက်​မရှိလို့ ကမ်းနှဖူးတဲထိုး​နေတဲ့ မာဂ တဲစုတ်​​လေးကို ဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးတာ​ရော အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
​တောမှာလယ်​စိုက်​စားတာကို တိုင်​ပတ်​တယ်​ ဆိုပီးအသိမ်းခံရလို့ မြို့တက်​မိတ်​ကပ်​ပြင်​စား​နေတဲ့ ဆက်​ဆက်​တို့ကိုလည်း ​မှောင်​ရိပ်​ခိုတယ်​ဆိုပြီး ဖမ်းတာလည်း အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
ဦးဇင်း သုမင်​ဂ​ကျောက်​ကို မီးပူ​ဇော်​ပီး ဦးဇင်းမလိမ္မာကို ​ကျောင်းသိမ်းတာ​ရော အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
​ဒေါ်ခင်​ခင်​လတ်​ကို ​ခေါင်းမှာ ဘူးလက်​ဆုချတာ​ရော အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
သတင်း​ဒေါက်​ ကိုခိုမ်​ကြီးကို အပီ​ကျွေးလိုက်​တာ​ရော အဒူ​တေတုန်း​ဟင်​င်​?
​ကျော်​ ဥာဏ်​မမီလို့ပါ ခီညာ
လွန်​တာစိရင်​ ၀င်​ဒါမီယာမှာ ​နေရပါဇီဗျာ
အားးးလုံးးး ရဲ့ တရားးးခံက
နေသိန်းးသန်းးးညွန့်ဝီ ဂီ ပဲ..!!!
ခုတော့ အသွင်ပြောင်းးပြီးးး ချိ်တ်ထမီ ဝတ်ထားးးတယ် ဆိုလားးးးး
ထေရာဝါဒနိုင်ငံတွေများ.. နှစ်၁၀၀၀ကြာလည်း.. ငြိမ်းချမ်းတာလိုက်လို့..
သီရိလင်္ကာ- ကမ္ဘာအကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်( တမီလ်နဲ့အိစုးရ) ကိုချလိုက်သမှ.. တခြိမ်းခြိမ်း..သေလိုက်ကြ..။
လာအို-ကမ္ဘောဒီယား – ပိုပေါ့သတ်နှုန်းက.. ဟစ်တလာထက်များကြောင်း…များကြောင်း..။
ထိုင်း – ကမ္ဘာအာဏာအသိမ်းဆုံးတိုင်းပြည်တခု…။ အုပ်စုပဋိပက္ခအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်တခု..
( ဒါပေမယ့် ထေရာဝါဒတွေထဲအချမ်းသာဆုံး.. ဘာဖြစ်လို့လည်း…ဆိုတော့… ဘုန်းကြီးတွေအထက်မှာ ဘုရင်ရှိပြီး.. တတ်နိုင်သလောက်.. ၀င်ဝင်.. ထိမ်းပေးလို့…)
မြန်မာ.. အနော်ရထာလက်ထက်ကစပြီး.. သမ,လိုက်တာဟာ… နှစ်၁၀၀၀ သာပြည့်တယ်..။ ဗမာလူမျိုးကြီးက.. မွန်-ခမာတွေလို.. လူဦးရေတွေတက်… ကြီးကိုပဲကြီးမလာနိုင်…။
စစ်တိုက်သတ်ဖြတ်ဗိုလ်ကျလွန်းတော့.. တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း.. သွေးအစပ်မခံ..မျိုးမပေါင်းနိုင်…။ ဂျပန်တွေ.. ၊အာရပ်တွေ..။ ဥရောပသားတွေလို.. မတူကွဲပြားလျှက်က.. တသားတည်းမဖြစ်လာ..။
ဆက်မလား…. ဖြတ်မလား.. ဘာသာရေးတွင်သာရှိ..။
သူ့ပြည်နယ်ထဲ.. သူတို့ဖာသူတို့ ဘိုချုပ်ကြီးတွေ”အကျငွေ”လေးယူပြီး.. စိနပြည်ကိုဆည်ဆောက်ခွင့်ချပေးတာကို..တတိုင်းပြည်လုံးကဆန္ဒာတွေပြသမို့.. ကချင်တွေခမြာစားပေါက်ပိတ်..။
ဒီကြားထဲ.. သူတို့သစ်ပင်တွေခုတ်ရောင်းရငွေနဲ့.. အသက်ဆက်ဖို့လုပ်တာကို.. ပြည်ထောင်စုအစိုးရက၀င်ဖမ်းသိမ်း..
ကိုလိုရာဒိုမြစ်ရေကို.. ယူအက်စ်ပြည်နယ်တွေဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်..ခွဲဝေသုံးစွဲရတယ်ဆိုတဲ့.. သဘောတူညီချက်လေးဖတ်ချင်လျှင်..။
he Colorado River Compact isa1922 agreement among seven U.S. states in the basin of the Colorado River in the American Southwest governing the allocation of the water rights to the river’s water among the parties of the interstate compact. The agreement was signed atameeting at Bishop’s Lodge, near Santa Fe, New Mexico, by representatives of the seven states the Colorado river and its tributaries pass through on the way to Mexico.
သူကြီးမင်း ကတော့ မည်းမည်းမြင် ဘာသာရေး ဘဲ ဆွဲပြီး ထိပ်တင် တော့တာဘဲ။
ဦးသန်းရွှေ က ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။
ဦးမင်းအောင်လှိုင် က ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။
ထိပ်တန်း ခရိုနီ များ ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။
ဝီ the ဘုန်းကြီး လား ။
သူတို့ ကို ကြည့်ပြီး က နေရ ရှာတာ။
သူ့ပါးစပ် က တစ်ချိန်လုံး ပွင့် နေတာမှ မဟုတ်တာ။
ဟိုက ဟ ဆို ဟ။
ဟိုက ပိတ် ဆို ပိတ်။
ကဲ ပြောပါဦး။ အဲဒီ ဘုန်းကြီး မဟုတ်သော သူများ က ဘာသာရေး အတွက် လုပ်နေတာလား။
သူတို့ ချမ်းသာဖို့ လုပ်နေတာလား။
သူကြီး နဲ့ ကျွန်မ တို့ နှစ်ယောက် မှာ တစ်ယောက် ယောက် လွဲ နေတာတော့ အမှန်ဘဲ။
သက်တော် ရာကျော် ရှီပါစေ။
. လော် အရေးအခင်းကြီး လဲ
အဒူဒေဒုန်းဟင် ဘာဒေဒုန်းဟင်။ ငါ့ပါ့ပွတ်ကလေးသိမ်းမခံရသေးခင်အမြန်ပြေးအဲ့လေ အောင်မယ်မင်းပြောင်ရဲ့ ဒီလိုဘဲလုပ်နေ အဲ့ ပစ်နေ အဲ့ ကျိနေဒေါ့မာလား အဟအဟအဟ။ ဘင်ဂါဘလက်က ပန်းရောင်ပြောင်းဒေါ့မာအေ့။ pink label အသစ်စမ်းထုပ်မယ်ကြားဒါဘာအေ။
ပြောရဲပါဘူး!!!! တော်ကြာ ညှိမရလဲလျောက် ရလဲလျှောက်နဲ့သူတွေက xသည်လို့ဆဲပြီး ဘူဒိုဇာနဲ့ အထိုးခံနေရမှဖြင့် ဒုတ်ခေါ
မြန်မာက.. သက်ဦးဆံပိုင်ပဒေသရာဇ်စနစ်မှာလည်း.. ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
အင်ပါယာ..အာဏာရှင်ဘုရင်တွေလက်ထက်မှာလည်း.. ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
ကိုလိုနီပြုခံရပြီး.. အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တော့လည်း.. ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး.. ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်..လက်ထက်မှာလည်း… ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
ကွန်မြုနစ်လက်ထက်မှာလည်း.. သူပိုင်စားတဲ့နယ်တွေအောက်… ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်း.. ဘိုနေ၀င်းကြီးတော်လှန်ရေးကောင်စီဆိုအုပ်ချုပ်တုံးကလည်း… ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတာကြီး.. အောက်… တပါတီလက်ထက်မှာလည်း.. ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
စစ်တပ်ကအာဏာပြန်သိမ်း… ဘိုစောမောင်၊ဘိုသန်းရွှေကြီးလက်ထက်မှာလည်း… ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။
အဲ..အခု.. ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလည်း… ချကြ..သတ်ကြ..သေကြနှင့်.. မငြိမ်းချမ်း.. ။ မှာပဲ..။ မှာပဲ..။
မတော်.. ဒီ… အမျိုးဘာသာ..သာသနာနဲ့…။ ဒီချုပ်..။ ကျောင်းသားတွေတက်… အုပ်ချုပ်ကြဦး… ဟဲ..ဟဲ..။ ဟဲ…ဟဲ..။
ကျုပ်​ သမိုင်း အင်းစိန်​လမ်းမှာ ပါဆင်​ဂျာမရတာ
Every nation gets the government it deserves. !
ဆိုတော့… အင်းစိန်ထိဆက်သွားမလား… လှည်းတန်း လမ်းဆုံထိ ပြန်လှည့်မလား..။
အသံသဲ့သဲ့ ကြားမိတာတော့ တဲတွေကို ဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးပြီး တိုက်ပေါ်တင်ပေးမယ်ဆိုလားပဲ
နောက် သက်တမ်း ၄ နှစ်ရရင်လည်း ပပျောက်ရေးလုပ်ဦးမယ်ဆိုလားပဲ။
ဓစို ပဋိပက္ခရှိမှ တိုးတက်သီ စိုဒါ မြန်တျန့်ပျီတွက် ဟုပ်ဖူးပေါ့စ်…
လူဆိုတာ စိတ်သဘောမတိုက်ဆိုင်တာ..။ ပဋိပက္ခ.. ရှိမှာပဲ..။
မှားတယ်ထင်ရင်..ထင်တဲ့သူက နောင်မလုပ်ဖြစ်ဖို့.. ၀န်ချတောင်းပန်..။ တောင်းပန်ခံရသူကကျေအေးခွင့်လွှတ်..။
ဗမာတွေကတော့.. တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်တောင်းပန်တာမရှိ.။ ကျေအေးတာလည်းမရှိ..။
ဆော်ပလော်တီးပြီးရင်းတီးသမို့.. ဗမာ့လူဦးရေက.. နှစ်၁၀၀၀သာကျော်သွားတယ်..။ လူဦးရေသန်း၎-၅ဆယ်ကမကျော်..။
နှစ်၁၀၀၀ ထဲ.. ဗမာ-မွန်၊ ဗမာ-ရခိုင်၊ ဗမာ-ရှမ်း၊ ဗမာ-ကသည်း၊ ဗမာ-မွန်ဂို.. ဘယ်လောက်များသတ်ခဲ့..အသတ်ခံခဲ့ကြရတယ်မသိ..။
matarmagyee gi gi
.လူတွေကို ဘရိန်း မ၀ပ်ဘဲနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ မအုပ်ချုပ်နိုင် ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးပညာရှင် ဂျော့အိုဝဲ ရဲ့ သီဝရီဟာ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မှားယွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
မိန်းမတွေရဟန်းမ(ဘိက္ကူနီ)ဖြစ်ခွင့်ကို.. ပေါင်နှလုံးကြားကဟာနဲ့ကိုင်တုတ်ပြီးပြောတော်မူတဲ့.. ဆရာတော်ဘုရားကြောင့်.. မိန်းမထုခမြာ..ဗုဒ္ဓဘုရားတန်းတူပေးထားတဲ့အဆင့်ကလျှောကျရ.. မယ်သီလရှင်ဘ၀နဲ့တင်းတိမ်ရ..။ ကျေးဇူးကြီးလှ.. ဆရာတော်ကြီးဗျ..။
မင်းတုန်းမင်းဖြစ်မယ့် မောင်လွင်ကို သူ့ငါးခြောက်ပြားခိုးစားလို့ဆိုပြီး ကြိမ်နဲ့ဆော်ပလော်လိုက်လို့.. ငယ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့မင်းတုန်းမင်းက..သူ့ညီတော်မောင် ကနောင်မင်းရေမြုတ်ဗုံးစမ်းပြီး.. ဧရာဝတီရေကြောင်းကတက်လာမယ့်အင်္ဂလိပ်ကို ချဖို့စစ်ပြင်တာကို.. စိတ်ဆိုးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးကြောင့်..ရေမြုတ်ဗုံးမစမ်းရ.. မြန်မာပြည်ကိုလိုနီဖြစ်.. ကမ္ဘာမှာအင်မတန်လှတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရ.. ကျေးဇူး..ကျေးဇူး..ကြီးလှဆရာတေ်ာကြီးဗျ..။
ဟိန္ဒူတွေက နွားသားမစားတာကြောင့် ဟိန္ဒူချစ်တီးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ ကျေးလက်ဒေရွာသားတွေအလိုကျ.. မြန်မာတွေပါနွားသားမစားရ..။
နွားပါမမွေးရဖြစ်ကုန်သမို့..တိုးတိုးသားခေတ်မယ်.. ကလေးတွေမယ်လိုအပ်တဲ့အဟာရဓာတ်ပြည်မှီအောင်မကြွေးနိုင်ဖြစ်ပြီး.. ဥာဏ်ရည်ထုံတဲ့မြန်မာကလေးတွေမွေးလာရ..နွားတွေရဲ့အသက်တွေသိန်းချီချမ်းသာရ..။ ကျေးဇူးကြီးလှ.. နွားမေတ္တာစာဗျ..။
“ဆရာ”တောင်မှ..”တော်”၀င်ပြီး.. “ဘုရား”ထက်”ကြီး”သမို့.. အဲဒီ”ဆရာတော်ဘုရားကြီး” ဘွဲ့တော်ကြီးကိုက..
ဘုရားအလိုကျ.. ဟုတ်ပါ့မလားတွေးတွေးရင်း… ထားလိုက်ပါတော့မယ်..။
ဦးဇင်း သုမင်​ဂ​ကျောက်စ်လည်း စိတ်ပိန်နေတယ်…
ရွာသတင်းတွေကမကောင်း… ကျူးကိစ္စတွေမှာ ဝါဝါဝတ်တွေပါ ပါသတဲ့…
လောကီကိစ္စ လှည်းအရေး နွားအရေးအထိ ပါရင်တော့… ဂိန်းဘောဆိုက်တော့မယ်…